Zvese zvaunoda Kuti Uzive Nezve Yekumusoro-Yemweya Bhokiseni - Inobereka
Zvese zvaunoda Kuti Uzive Nezve Yekumusoro-Yemweya Bhokiseni
Kunyangwe yavo yekunze muscled uye kunetseka kuunyana kutaura, maBoxers anodikanwa, akakwirira-akasimba, ane simba imbwa dzemhuri .
Iyo inozivikanwa zvakare seGerman Boxer kana Deutscher Boxer, imbwa dzakachena idzi musanganiswa wakakwana wevadziviriri vekuchengetedza uye inotapira-inodzora, ichivaita mukuru nevana .
Iye Boxer ndiye muchengeti wemhuri waunoda here? Verenga pamusoro kuti udzidze zvese zvaunoda kuti uzive nezve idzi dzinotamba dzevana.
Nhoroondo yeGerman Boxer
Iye Boxer anotaridzika sei?
Temperamentament: Mabhokisi akanaka imbwa dzemhuri here?
Maitiro ekuchengeta yako imbwa yeBoxer
Imbwa dzeBoxer dzakagwinya here?
Yakawanda sei iyo Boxer puppy?
Zvimwe zvinodikanwa zveBoxer zvinosanganiswa
Imbwa yeBoxer yakakunakira iwe?
Kuenderera mberi nekuverenga: Zvakafanana mhando kune iyo Boxer
Vetsiva vakatangira kuGerman mukupera kwezana ramakore rechi19. Ivo vane hukama nemhando dzeMastiff neBulldog.
MaGerman maBoxers angangove akarererwa pasi kubva kumbwa hombe yekuvhima inonzi Bullenbeisser, zvinoreva bhuru inoruma.
Idzi imbwa dzakaberekerwa kubhaira-kubhaira, kurwa imbwa, uye kuvhima-mhuka-huru, sezvo vaigona kutora pasi mabheya uye nguruve dzesango.
Vanetsiva vanopihwa mazita mushure memutambo wetsiva nekuti pavanenge vachizvidzivirira, vanomira nemakumbo avo ekumashure uye vanoshandisa makumbo avo kumberi ku 'box.'
Iyi tsika yetsiva ichiri kuonekwa mumaBoxer azvino, izvo zvinoita kuti nguva yekutamba inakidze kutarisa. Ivo vanofarira kubatabata matoyi, imbwa, kana vanhu, ingangoita sekitsi yaizoita!
Kunyangwe hazvo vakavambwa pakutanga sembwa dzinorwa, iye wazvino Boxer ave kuzivikanwa sembwa inoshanda, ine hunhu hwayo, hunofambiswa nebasa. Vetsiva vanotoshanda sembwa dzemapurisa kuGerman.
Yekutanga Cluber kirabhu yakavambwa muMunich muna 1895. Vakagadzira yekutanga Boxer zviyero zvekumisikidza gwara rekufuga. Vakatanga kuratidzwa kwembwa kuratidza avo vanodiwa maBoxers.
Mushure meHondo Yenyika I, iye wazvino Boxer akasvika muUnited States. Masoja eAmerica akadzoka kumba kubva kuhondo neBoxer imbwa mascots. Mapoka acho akaenda musango uye maAmerican vakafarira rudzi urwu.
Iye Boxer yaive imwe yemhando dzekutanga dzakazivikanwa na Iyo American Kennel Kirabhu (AKC).
AKC yakanyoreswa rudzi rweBoxer muna 1904 sechikamu che Kushanda Boka . Mabhokisi anozivikanwa zvakare ne American Boxer Kirabhu .
Bhokiseni akaenderera mberi achiwana mukurumbira muUnited States, uko yakamisikidza mumhando gumi dzepamusoro dzinozivikanwa pamakore gumi apfuura. Iyi imbwa isina mbichana inosvika gumi nembiri kubva muna 196 muAKC inobereka mukurumbira.
Imbwa dzeBoxer dzinotaridzika, dzine chipfuva chakafara, nyama yemhasuru, uye kufamba kwejaunty. Ivo vane shaya ine simba ine underbite, iyo regal, brachycephalic (squashed) musoro, uye pfupi muromo.
Maziso avo akadonha, nerima bhuruu anofumura yavo yemukati yekutamba hunhu.
Unogona kuona musiyano mudiki pakati peGerman Boxers neAmerican Boxers. MaGerman maBoxers ane misoro mikuru uye yakakura, yakawanda mhasuru inovaka.
Mabhokisi ane nzeve dzinopeta zvakasununguka. Kana iwe ukaona Boxer nenzeve dzakamira, zvinoreva kuti vanga vari kubvaruka . Zvimwechetezvo, zvine muswe mupfupi, asi vamwe varidzi vane miswe yakamiswa kana kubviswa.
Iyo AKC inotaura kuti kucheka nekumisa dhoko zvinochengetedza hunhu hwekuzvara, kunyangwe varidzi veBoxer vazhinji vari kusiya vana vavo kana zvisikwa.
Imbwa dzeBoxer dzinokura zvakadii?
Mabhokisi anotora makore matatu azere kuti ave munhu mukuru. Ivo vari vepakati kusvika pakati-hukuru hukuru.
Vakuru vechirume vanorova vari 23 kusvika 25 inches kureba (57-63 masentimita) uye 65 kusvika ku80 mapaundi (30-36 makirogiramu).
Vakadzi maBoxers akadiki zvakanyanya, kuyera pakukwirira kwe 21 kusvika 24 inches (53-61 masentimita) uye kuyerwa 50 kusvika 65 mapaundi (22-30 makirogiramu).
Nekuda kwehukuru hwavo, maBoxers anoita zvakanaka mudzimba dzine yadhi yekunze kuti ivo vaongorore uye kupisa mamwe emasimba avo emagetsi.
Ivo vanogona kuchinjira kune kugara kweimba sekureba sekunge vaine yakawanda yekurovedza zuva nezuva.
Kune vanoda imbwa vanoda imbwa diki, vamwe vafudzi vanopa diki maBoxer. Aya haasi iwo chaiwo maBoxers asina kuchena, asi asi musanganiswa wakasanganiswa uyo unopa humwe hunhu hweBoxer mupakeji diki.
Mini Mabhokisi anokura kusvika paavhareji kureba kwe 15 kusvika 22 inches (38-56 masentimita) kureba uye huremu 25 kusvika 55 mapaundi (11-25 makirogiramu).
Mabhokisi ane majasi ane bvudzi pfupi
Mabhokisi anozivikanwa nekutsvedza, kupenya, bhachi pfupi . Nguo dzavo dzinogona kunge dzakasviba (mwenje suruvara, tsvuku-tsvuku, kana mahogany) kana brindle (tambo-mitsetse mitema mitema pajasi jena), kana chena.
Vamwe maBoxers vanogona kuita kunge vane bhachi dema dema, asi izvi zvinonzi reverse brindle. Zvinongoreva kuti mitsetse yebrindle yakakora zvekuti inovhara jasi repasi pasi.
Bhokiseni imbwa kumeso inogona kuve neyakaomeswa dema masiki, dema masiki ane machena mamaki, kana kungo chena mamaki. Muchena machena anowanzo kungove patsoka uye padumbu.
Makumi maviri kusvika makumi maviri neshanu muzana emaBoxers anozozvarwa aine mabhachi machena.
AKC inoisa mwero wekuti maBoxers anofanirwa kuve nezvikamu zviviri kubva muzvitatu zvejasi ravo senge fawn kana brindle, zvichiita kuti vachena vatambi varegererwe kutora chikamu muAKC imbwa show.
Vachena vatambi havazi maalbino. Ivo vachangobva kugara nhaka yakanyanya kuchena yekuona geni kubva kuvabereki vavo vese.
Vanoshaya huwandu hwakaringana hwe pigment uye vanoda kumwe kuchengetwa kwerudo kwekuwedzera kuti vasawane kukuvara kwe UV.
Kunyangwe paine hombe, tsandanyama, uye simba kuvaka, maBoxers vane moyo usina mhosva wegoridhe. Ivo vanoita dzakanakisa imbwa dzemhuri uye vanodiwa vanochengeta vana nekuda kwavo kwekudzivirira uye kuvimbika hunhu.
Ivo vanozivikanwa sembwa 'mumvuri', zvichireva kuti vachatevera varidzi vazvo kwese kwese.
Vanetsiva vanowanzo shinga uye vanonakidzwa. Varidzi vakadana yavo wiggly zunza 'iyo itsvo bhinzi' kutamba nekuti vanomonyanisa miviri yavo kuita semi-denderedzwa kana ivo vachifara.
Imbwa dzeBoxer dzinodanana, dzinoda kumbundirwa, uye dzinokufukidza mune slobbery kutsvoda. Ivo vanoda kuve padhuze nemunhu wavo sezvazvinogona.
Ivo vanowanzoedza kugara mumakumbo emuridzi wavo, kunyangwe nehukuru hwavo hukuru! Varidzi vazhinji vanoseka kana imbwa dzavo dzeBoxer dzakura dzichiri kuda kubatwa uye kubatwa kunge vacheche!
Mabhokisi ndidzo mhuka dzemhuri dzakakwana sezvo ivo vari vanyoro uye vane moyo murefu nevana. Izvi zvinosanganisira mhuri dzine vana vadiki uye vacheche.
Ingo ita shuwa kuti iwe unodzidzisa wako Boxer kuti asatambe zvekutamba, nekuti izvi zvinogona kugogodza pasi nekukuvadza mwana mudiki.
Tarisa uyu anodikanwa Boxer achitambanudzira ruoko rwemucheche nepawoko rake:
Kunakidzwa chokwadi: Mabhokisi nderimwe remhando dzinokurumidza dzinozivikanwa dzembwa. Vanogona kumhanya Makiromita 38 kusvika ku45 paawa! Gaiti yavo ndeyemitambo uye vanofara panguva imwe chete.
Vakazara nekubutira simba, vanofarira kusvetuka, kumonyorora, kutenderera, uye kutenderera.
Mabhokisi ane njodzi here?
Kunyangwe paine kutaridzika kutyisa, maBoxers ari kwete hasha imbwa.
Nekudzidziswa kwakakodzera uye kushamwaridzana, maBoxers haazove nechikonzero chekurova kana kuratidza hunhu hwehasha.
Ehe, pachange paine nyaya nezvekurwiswa kweBoxer, asi izvi zvinonyanya kuitika nekuda kwemuridzi anodzidzisa Boxer yavo kuva imbwa ine hukasha yekurwisa.
Zvekutanga kushamwaridzana kwakakosha kubatsira wako Boxer puppy kuti anzwe akasununguka akatenderedza dzimwe imbwa nevasingazive.
Kana vachinge vaungana pamwe nekudzidziswa, maBoxers anoita mushe mudzimba nedzimwe dzinovaraidza, kusanganisira katsi, sekureba sekunge ivo vanorerwa navo.
Bhokiseni vane hushingi uye vasingatyi, vachivaita vakanaka watchdogs .
Ivo vanogara vakasvinura uye vachadzivirira zvakanyanya mhuri yavo. Ivo vangango kunyevera iwe kana vanhu vasvika pamba pako.
Imbwa dzetsiva hadziiti hukura zvakanyanyisa, kunyangwe ivo vachitaura uye vachizhamba nekupuruzira. Ivo zvakare vanotaurirana neakanyanya kunaka 'woo-woo' kurira pane yechinyakare kuhukura.
Kuhukura kunogona kuwedzera kana kusiyiwa pamba wega, izvo zvavasingafarire.
Mazhinji maBoxers anozoona Kuparadzanisa kunetseka painosiiwa yega kwenguva yakareba.
Saka ramba uchifunga kuti ivo vanofanirwa kuongororwa nemumwe munhu masikati machena kana iwe ukashanda maawa mazhinji kunze kwemusha.
Ko maBoxers ari nyore kudzidzisa here?
Mabhokisi ari akangwara uye zvine mwero nyore kudzidzisa . Ivo vanoda rovedzo kuti vave vakasimba, bva vachifara! Mabhokisi anowanzo shatirwa nyore, saka sanganisa iwo uye siyanisa maitiro ako kuti kuda kwavo kugutsikane.
Tarisa pakutora wako Boxer kuti anzwisise kuti iwe ndiwe unotungamira mutungamiriri wepakeji, uye ivo vanoteerera. Usapa mubayiro chero hupi hunhu hunhu, nekuti izvi zvinogona kutungamira kwavari kudheerera dzimwe vana.
Kudzidziswa imba Mabhokisi ehutsiva akafanana nechero imwe mhando, kunyangwe yavo yakasindimara inogona kureva kuti zvinotora kusvika gore kuti ive isina tsaona zvizere.
Chinokosha ndechekuenderana, kugara nemoyo murefu, uye kutanga kutanga. Zvakanyanya kuoma kusadzidzisa kana kugadzirisa tsika dzakaipa. Kubata uye kurumbidza kunobatsira wako Boxer puppy kuti ive isina tsaona pasina nguva.
Yako goofy, simba, akavimbika shamwari yakaderera-kugadzirisa kana zvasvika pakushambidzika uye kwakanyanya-kugadzirisa kana zvasvika pamararamiro. Wako wetsiva achadonha mvura, ngonono , tora nzvimbo, uye udurure.
Ivo imbwa chaiyo kune varidzi vanoshanda avo vanoda kushandisa nguva vachirovedza muviri. Vanoda kutarisirwa uye kushamwaridzana.
Kudzidzira yako Boxer imbwa rudzi
Rangarira kuti maBoxers anotora makore matatu kuti vakure zvizere kune imbwa vakuru. Izvi zvinoreva kuti vane simba rekutamba rembwanana kwenguva yakareba kupfuura mamwe marudzi.
Kuita zvezuva nezuva hazvireve kungoreva kufamba nekukurumidza kutenderedza block. Idzi pupu dzinokura zvine simba kutamba.
Mabhokisi anoda Maminitsi makumi mana kusvika paawa yekurovedza muviri mazuva ese. Izvi zvinogona kutyorwa kuita maviri ezuva nezuva kufamba kwehafu yeawa imwe neimwe uye imwe nguva yekutamba inopindirana.
Mutambo wekutora kana kugona kudzidzisa unochengeta yako Boxer inosimudzirwa mupfungwa nepanyama.
Mabhokisi haasi echisimba kushambira. Itsika yakanaka yekuchengeta mbatya dzekushambira paBoxer yako kana uri padyo nedziva kana padziva.
Mabhokisi ane yakakwira mhuka yekutyaira , saka ita shuwa kuti kurovedza muviri kunowanikwa muyadhi yakakomberedzwa kana pane leash kufamba.
Mabhokisi anoita zvakanaka kana achinge anyatsodzidzira. Hunhu hwekuzvibata hunongomuka chete kana vachinge vafinhwa uye kusarovedzwa.
Kana iwe ukapa yako Boxer nzira dzekutsvaira simba, iye achazorora uye kutsvedza pasofa uye anozoteerera uye kuteerera.
Zvikasadaro, iwe unenge uine yakaipa misikanzwa-inotarisa kutsvaga kuparadzwa.
Kugadzirira Boxer yako
Izvo zvekushambidzira zvaunoda zveBoxer zvako zviri nyore uye zvakaderera kugadzirisa.
Nekudaro, iwe unogona kuwana yako imba yakavharwa nedorool. Mabhokisi anozivikanwa yakanyanyisa kudonhedza, saka chengeta izvi mupfungwa kana iwe wakakwiridzirwa kunze neslobber.
Nepo jasi ravo pfupi riri nyore kugadzirisa, vanozviita shed uye saka ndizvo kwete hypoallergenic .
Iwe unozofanirwa kupukuta kazhinji mukati mekudonha kwavo mwaka munguva yechirimo. Vachadurura zvidiki zvidiki zuva rega rega kwegore rose.
Mabhokisi anongoda kugeza chete kamwe chete pamwedzi . Vanofarira kuzvishongedza sezvinoita kitsi. Mabhokisi anozivikanwa nekuva vakachena uye vasina kunhuwa. Ivo vangangodaro vasingazombofaniri kuona nyanzvi yekushambadza.
Chenesa makwikwi avo nejira nyorova uye ivo vanozove vakanaka kuenda!
Iwe unozofanirwa kukwesha yavo furwa kamwe pasvondo, kunyanya kana iwe ukaona yako pup ichidurura. Tsvaga bristle brashi kana yekushambidza mitt.
Shandisa chigunwe chembambo kuchengetedza zvipikiri zvavo kutetepa (haufanire kuvanzwa vachirovera pasi).
Usakanganwa kukwesha mazino avo kanenge kaviri pasvondo! Nekudaro, kukwenya mazino kwemazuva ese kwakanyanya kudzivirira chirwere chenguva.
Mabhokisi asiri imbwa dzakasimba dzekunze, kunyangwe hazvo saizi hombe. Vari tembiricha inononoka . Mhuno yavo ipfupi inoita kuti kupisa kunetse, uye jasi ravo pfupi rinoita kuti kutonhora kusiririse.
Ivo vanonyanya kuchengetwa mukati kunze kwekunge kuri kwekufamba kwavo kwemazuva ese kana nguva yekutamba kupaki yembwa.
Ko maBoxers anodya chii?
Fudza yako Boxer yemhando yepamusoro imbwa chikafu uye ive shuwa yekupa mashoma kushomeka. Rudzi urwu runogona kuve kufutisa kana vakanyanyisa kuwanda mumakoriyori akawandisa.
Rudzi urwu rwunozivikanwa nekunyanyisa kubiridzira, saka ita shuwa kuti hausi kubvumidza imbwa yako chero tafura yezvimedu, kana iwe uchave urombo!
Ita shuwa kuti urikusarudza chaiyo mhando yechikafu chezera rembwa yako (mbwanana, mukuru, mukuru). Chikafu chinovaka muviri chinofanira kusanganisira puroteni rese sechinhu chikuru.
Zviyo zvinogona kuwedzera matumbu avo. Mabhokisi anokwanisa kutadza kurwara, saka zviri nani kutsvaga chikafu chisina zvinowedzerwa kana dhayi rekudya.
Boxers vanoita zvakanaka ne kudya kaviri pazuva . Mazhinji maBoxer akura anodya 2.5 kusvika 3 makapu ye kibble pazuva.
Kuti udzivise kubhururuka, ipa yako Boxer nzvimbo yepamusoro yekupa chikafu uye yekudyara yephazili kuti udzikise kumhanya kwavanodzika chikafu chavo.
Nehurombo, iyo yerudzi rweBoxer inowanzo kuve nezvinetso zvehutano uye kusagadzikana kwemagene.
Ivo vanoonekwa seye brachycephalic rudzi nekuda kwechiso chavo chakapunzika. Izvi zvinokonzeresa kuridza ngonono, kumusoro kwekufema matambudziko, uye nenyaya dzekufema.
Respiratory Distress Syndrome yakajairika mumarudzi aya, saka ramba wakatarisana neBoxer yako kana ichiita muviri kuti uve nechokwadi chekuti kune oxygen yakakwana inoyerera.
Bvunza kuna chiremba wemhuka kana iwe ukaona mwana wako achifema zvakanyanya, kukosora, kana kuva nemiromo yebhuruu uye matadza.
Mabhokisi anowanzobatwa nechirwere chemwoyo chakagara nhaka. Dambudziko rakanyanya kuparadza ndiBoxer cardiomyopathy , chinova chirwere chemoyo chinouraya.
Ivo zvakare vanogona kugara nhaka aortic stenosis kana subaortic stenosis, kunova kudzikira kweaortic vharuvhu.
Pane zvinokurudzirwa bvunzo dzehutano idzo vafudzi vese vanofanirwa kuongororwa.
Izvi zvinosanganisira hudyu uye elbow ongororo (yematambudziko akabatana uye hudyu dysplasia), kuongororwa kwehutachiona, AS / SAS Cardio, chirwere cheaortic vharafu, Boxer cardiomyopathy, ARVC DNA & degenerative myelopathy DNA test.
Mabhokisi anokwanisa kubatwa gastric kudzikamisa-volvulus kana bloat , inova ndiyo iyo dumbu ravo rinogona kuzadza nemhepo, zvichikonzera gastric torsion kana ikanyanya.
Gara uchitarisa kune wako Boxer mushure mekudya kuti uve nechokwadi chekuti vari kugaya chikafu chavo nemazvo uye havasi mune chero kurwadziwa.
Gomarara ndicho chinonyanya kukonzera rufu murudzi urwu (uyo akaverengerwa nhamba-imwe imbwa yakachena kuti iwedzere mast cell tumors).
White Boxers vanonyanya kubatwa negomarara reganda. Gara uchiisa zinc-oxide yemahara yezuva pane mwana wako ane ruvara rwechiedza kana uri panze.
Mabhokisi anogona zvakare kugara nhaka mamiriro eziso senge corneal dystrophy , paunogona kuona nzvimbo isina kujeka mukati mekona yavo.
Demodectic mazhinji ndeimwe nyaya yehutano yekuchengetedza. Iyo Demodex mite inogona kukonzeresa zvitsvuku zveganda rine ganda, mhanza, kana hutachiona.
Mabhokisi anowanzoitika chisimbwa, izvo zvinogona kukonzeresa ganda.
Chekupedzisira, zvakakosha kuti ucherechedze kuti makumi maviri muzana evachena maBoxer matsi, ndosaka vachena maBoxer vasingafanirwe kuberekwa. Izvi zvakare zvinosanganisira maBoxers anotakura yakanyanya kuchena yekuona geni.
Ane hutano Boxer ane hupenyu hwe Makore gumi kusvika gumi nemana ekuberekwa . Izvi zvingaite kunge zvakapfupika pane dzimwe imbwa dzedzinza uye zvinogona kuverengerwa kune rurefu runyorwa rwezvinogarwa nhaka zvehutano.
Ive neshuwa yekupinda mushe-cheki nguva dzakatarwa nachiremba wako kuti utaure nezve chero mamiriro ehutano.
Zvakare, rangarira kuti kudya kwakaringana uye hutongi hwezvekuekisesaiza kuchabatsira kuti Boxer yako ive noutano sezvinobvira, uye izvi zvinozovabatsira kuti vasvike pakatarisira hupenyu hwakareba.
Sezvo nezvose zviyo zvitsaru, kunouya mutengo unorema. Chinhu chakanyanya kukosha kutsvaga imbwa ine hutano kubva kune anozivikanwa muberekesi.
Avhareji saizi yemarara emarara kubva pamashanu kusvika gumi embudzi. Iva wakagadzirira kubhadhara chero kupi kubva $ 800- $ 2,800 kune yako purebred Boxer mbwanana.
Vabati vembwa dzetsiva
Nekuda kwehuwandu hwehuwandu hwekusagadzikana kwemagene mubhokisi reBoxer, ita shuwa kuti iwe unowana yako mbwanana kubva kumuberekesi achida kuratidza humbowo hwekuyedzwa kwemajini uye kuongororwa kwehutano hwevacheche vevabereki.
Zvakare, iwe unogona kukumbira kuti muberekesi aratidze kuti ivo vanoteerera ne American Boxer Makirabhu Kodhi yeMitemo .
Iwe unowana sei vana veBoxer vachitengesa padyo newe?
Bata iyo American Boxer Club, Inc. nerubatsiro rwekutsvaga anodiwa weBoxer wekubereka padhuze newe. Kana, shanyira iyo AKC Musika kune runyorwa rweanowanikwa maBoxer vana kubva kune vanozivikanwa vafudzi.
Bhokiseni imbwa kununura nekutora
Nehurombo, vamwe varidzi vembwa havaite yavo yekutsvagisa uye iyo bouncy, yakakwira-simba zvido zvinosvika pakuve zvinorema. Iko kune kazhinji imbwa dzeBoxer dzinoda dzimba nyowani.
Bata yako yekugara mhuka mhuka kuti uone kana wako wekusingaperi shamwari akamirira iwe!
Tora-Pet-Pet kana kunyangwe mapoka epaFacebook anogona kukubatsira kutsvaga Boxer iri kuda imba.
Kana, tarisa aya mapoka ekununura anozvipira kuboka reBoxer:
Mhiri kweAmerica Boxer Kununura
American Boxer Kirabhu
Bhokisi Rinodzokorodza, Inc.
Yechipiri Chance Boxer Kununura
Gamuchira Kununura KweBoxer
Bullboxer Gomba : Uyu musanganiswa unodzivirira uye wakavimbika ndiwo muchinjikwa weBoxer uye Pitbull.
Wetsiva : Musanganiswa unodiwa weBoxer uye Labrador Retriever.
Mufudzi wetsiva : Musanganiswa weBoxer wechiGerman Mufudzi imbwa huru yekuchengetedza.
Mabhokisi Masanganiswa: Kune akasiyana akasiyana mazambuko anosanganisira ehunhu, anonakidza-anofarira hunhu hweBoxer uye ane mazita akanaka seBulloxer neBoggle!
Uri kutsvaga goofball hombe, izere nesimba-remweya simba? Iwe unayo here izvo zvinotora kufambirana nehunhu hwakaipa?
Pamwe iwe wakadanana nemeso akadonha uye kumeso kumeso, kana wakasangana neBoxer imbwa uye wakashongedzwa nehunhu hwayo hupenzi.
Pane zvikonzero zvakawanda nei Boxer iri imwe yeanonyanya kufarirwa imbwa marudzi muUnited States.
Kana zvikonzero zvese izvi zviri zvechokwadi kwauri, saka iye Boxer anogona kunge ari imbwa yakanakisa yemhuri yako!
Une chokwadi chekuwana shamwari inodiwa iyo inogara ichiunza inonakidza pfungwa yekuseka kumhuri yako.
Rangarira kuti rudzi urwu runoda kudzidziswa kusingagumi uye miganho uye yakawanda yekurovedza muviri zuva nezuva. Kana iwe uchikwanisa kupa izvo zvinhu, wako Boxer achada uye achachengetedza mhuri yako nekutapira kuzvipira.
Kana iwe ukaronga kushandisa kwemaawa marefu kure nemusha uye uchingoda husimbe lapdog, tarisa kumwe kunhu. Uyu mwana anoda kugara uchisongana uye nzvimbo yekutamba.
Zvakare, avo vakagara nhaka kusagadzikana kunogona kuve kunetsekana. Ramba uchifunga kuti iwe ungangoda bhajeti yechipfuwo hutano inishuwarenzi.
Une Boxer here? Kana kufunga nezvekuwana imwe? Tiudze nezve ako zviitiko kana pfungwa pazasi!
Iwe uchiri kusava nechokwadi here kuti iye Boxer akakunakira iwe asi moyo wako wakagadzika pane mbichana yakachena? Heano mamwe marudzi akafanana anogovera anodikanwa maBoxer maitiro mune akasiyana mapakeji madiki:
Bullmastiff : Kuda iye Boxer, asi uchitsvaga yakatokura imbwa? Tarisa uone inonakidza Bullmastiff.
Boston Terrier : Kuda iye Boxer, asi uchitsvaga mwana mudiki? Tarisa uone iro diki rine simba reBoston Terrier, rinozikanwa se 'The American Gentleman.'
Staffordshire Bull Terrier: Ida iyo Boxer, asi uchitsvaga zvishoma zvishoma kuvaka? Tarisa uone Staffordshire Bull Terrier, imbwa inozivikanwa nekuva imbwa huru yemhuri.
Red Husky: Zvese zvaunofanirwa Kuziva Nezve Iyo Tsvuku Siberian Husky
Iyo AZ yeGerman Mafudzi Mazita (150+ Varume, Mukadzi & Puppy GSD Mazita)
german shepherd blue nose pitbull mix
imarii lab yesirivha
kuziva rudzi rwembwa yaunayo
mazita ezvipfuyo zvembwa chena